အမေရိကန်သံရုံး ရန်ကုန်၏ ဗီဇာကိစ္စရပ်များအတွက် facebook page | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အမေရိကန်သံရုံး ရန်ကုန်၏ ဗီဇာကိစ္စရပ်များအတွက် facebook page
အမေရိကန်သံရုံး ရန်ကုန်၏ ဗီဇာကိစ္စရပ်များအတွက် facebook page
Posted by လင္းေဝ on Nov 2, 2010 in News |2comments
အမေရိကန်သံရုံး ရန်ကုန်မှ အမေရိကန်ဗီဇာလျှောက်ထားလိုသူများ အဆင်ပြေလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် ဖေ့စ်ဘွက် စာမျက်နှာတစ်ရပ် ဖန်တီးပြီး အင်တာနက်ပေါ်တင်ပေးထားပါတယ်။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းတာမကောင်းတာကတော့ တစ်ကဏ္ဍပေါ့ဗျာ။
ကောင်စစ်ဝန် ဌာန မှနေ၍ တင်ဆက်လိုက်သော အမေရိကန်သံရုံး ရန်ကုန် facebook page ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုစာမျက်နှာမှာ ဗီဇာလျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာရမည်များကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်။ ထိုသို့သော ဗီဇာအတွက်သတင်းအချက်အလက်များအပြင် ဗီဇာလျှောက်ထားသူများတွေ့ရလေ့ရှိသည့်အခက်အခဲများကိုပါကျော်လွှားပေး နိုင်ရန်လည်း ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ အမေရိကန် ဗီဇာများ ကိုမည်သို့စိစစ်ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ကိုင်ပေးနေကြောင်းကိုလည်း အသိပေးညွှန်းဆိုထားပါတယ်။ အဆိုပါလင့်ခ်ကို အောက်ပါအတိုင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါလင့်ခ်မှာ ဗီဇာဌာနရဲ့ နေ့စဉ်အပြောင်းအလဲ အချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြပေးထားသလို အရေးကြီးတဲ့သတင်များကိုလည်း အသိပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင် သတိထားရမယ့် အကြောင်းအရာ၊ပိတ်ရက်၊ နောက်ဆုံးတင်ရမယ့်ရက် စသည်ဖြင့်လည်း ပြောပြနေပါတယ်။ ဥပမာ- DV2012 ပိတ်ရက်ဟာ မနက်ဖြန် နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်နေ့ဖြစ်ကြောင်း စသည် နှိုးဆော်ချက်များ တိုက်တွန်းချက်များကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသူများအတွက် အဆင်ပြေမယ့် လင့်ခ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
DV2012 ပိတ်ပါတော့မယ်..။ တင်ချင်ရင် ယူအက်စ်နေ့ခင်းအချိန်တင်တာက ပိုလွယ်ပုံရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အယ်ရာချည်းပြလို့နေပါတယ်.။
နောက်တခုက https:// ကိုရွေးပြီးမှတင်တာပါ။ အဲဒါက လူသိပ်မရွေးတာမို ့နည်းနည်း ပိုတင်လွယ်ပါတယ်။
Thanksamillion for that, fri!
I will check it at facebook now.
I’d alrd applied DV for 2012.
I apply DV yearly by myself.
Never Win, haha!
Anyway, thx again, fri!